ISemrush Ithuthukisa Umbangi Wokukhokha Ngokuchofoza Ngokuchofoza | Martech Zone
NgoLwesithathu, July 24, 2013 NgoLwesithathu, July 24, 2013 Douglas Karr
Besingabalandeli nezinkampani ezingaphansi kwe Semrushiminyaka eminingi manje. Baqhubeka nokwenza ngcono iminikelo yabo futhi bandise amandla abo wokuthwebula idatha, banikeze ukuqonda okungakholeki ekubonakaleni kwezinjini zokusesha zamakhasimende ethu. Muva nje, Semrush kuthuthukiswe zabo Bika ngokuchofoza ngakunye - Ukunikeza isithombe esicacile nomlando wezinkampani oncintisana nazo ekukhangisweni kwenjini yokusesha ekhokhelwayo.
Nazi izici ezibalulekile zokubika kwe-Adsense okuthuthukisiwe:
I-Adsense General Trend - Lokhu kukusiza ukuthi ubone ukuthi izimbangi zakho zisebenzisa i-Adsense noma cha futhi kunikeza ukuqonda ngomsebenzi wazo owedlule.
Uhlobo lwabancintisani bezikhangiso basebenzisa - Ishadi likaphayi liletha idatha e-a-glance mayelana nezikhangiso ozisebenzisayo kakhulu. Ngokuchofoza kuhlobo olulodwa lwesikhangiso uzothunyelwa kumbiko onemininingwane.
Uhlu Lwezizinda lapho izikhangiso zishicilelwa khona - Phequlula amawebhusayithi asetshenziswa izimbangi zakho ukuthuthukisa i-Adsense yabo.Ungabona umbiko onemininingwane ngenani lezikhangiso eziboniswa kuwebhusayithi ngayinye.
Phenya Imibhalo Yesikhangiso Sabancintisana - Funda ukuthi yimiphi imibhalo eshicilelwa izimbangi zakho ezishicilelwa ku-Adsense, yebe izindlela ezinhle kakhulu, futhi uzivumelanise nemikhankaso yakho yesikhathi esizayo.
Phenya Imidiya Yokuncintisana - Manje usungazi kahle ukuthi yiluphi uhlobo lwemidiya olusetshenziswa izimbangi zakho futhi ungabona ukuthi yimiphi imikhiqizo ekhangiswayo kumabhanela abo.
Hlaziya amakhasi wokuncintisana okufika - Funda kabanzi ngamakhasi okufika kwabaqhudelana ukuze wandise ukusebenza kahle kwe-Adsense. Ku- Semrush, unekhono lokunquma lezo ezithandwa kakhulu.
Tags: izikhangiso zokuncintisanaUkuhlaziywa kokuncintisanathola izimbangi ze-ppcamakhasi okufikaizikhangiso zokucinga ezikhokhelwayoizikhangiso zombhalo ezikhokhelwayoizikhangiso zokuncintisana ze-ppcamakhasi wokufika wokuncintisana we-ppcizimbangi ze-ppcUkubika kwe-ppcizikhangiso zombhalo
Ukulinganisa Kanjani Ukuqukethwe Kokuqukethwe?
Mar 5, 2014 ku-4: 15 AM
Ngikhulume nezinkampani eziningi ze-PPC, kepha into ebaluleke kakhulu ongayenza emkhankasweni wakho wokumaketha amakhasi okufika. Zama le miphumela yenkampani eqhutshwa, ibashayele ku-256-398-3835. Bayinkampani yezokumaketha enhle kunazo zonke ongahamba nabo ngoba abagcini nje ngokwenzela imikhankaso eqinile ye-ppc, kepha futhi benza namakhasi okufika, i-CRO nokumaketha kabusha okuyizinto eziyi-100% ezidingekayo zomkhankaso wokumaketha ophumelele online. Izinkampani eziningi zikuthengisela into eyodwa eyi-1 efana ne-CRO, noma i-PPC nje, noma ama-popups, njll. Lokhu kuyindida ngokuphelele ngoba ngenkathi into engu-1 ingenza umehluko emkhankasweni wokumaketha ozinzile, ayikho into eyodwa yokwenziwa noma yokuqhekeka element ekumaketheni oku-inthanethi, udinga lonke iphakethe, bese ucija / ulungiselele ukusuka lapho.